बाइबलका कथाहरू: सबै खराब कुराको अन्त - यहोवाका साक्षीहरूको आधिकारिक वेब साइट
भन त तिमीले चित्रमा के देख्यौ? स्याबास! सेतो घोडचढीहरूको पल्टन। तर उनीहरू कताबाट आइरहेका छन्, राम्ररी हेर त। ती घोडाहरू बादल माथि-माथि स्वर्गबाट आइरहेका छन्। तर स्वर्गमा पनि घोडा हुन्छ र?
हुँदैन। यी घोडाहरू साँच्चैका घोडाहरू होइनन्। साँच्चैका घोडाहरू भए त, कहाँ बादलमा दौडिन सक्थे र? तर बाइबलले स्वर्गमा घोडाहरू दौडेको कुरा गर्छ। किन, तिमीलाई थाह छ?
उहिले-उहिलेका मान्छेहरू घोडा चढेर लडाइँमा जान्थे। यसकारण परमेश्वरले पनि पृथ्वीका मान्छेहरूसित लडाइँ गर्नुहुनेछ भनेर बुझाउन बाइबलले स्वर्गबाट घोडा चढेर आउने व्यक्तिहरूको विषयमा कुरा गरेको हो। परमेश्वरले लड्नुहुने युद्ध हुने ठाउँको नाउँ के हो, तिमीलाई थाह छ? आरमागेडोन। परमेश्वरले यो युद्ध लडेर पृथ्वीमा भएका सबै खराब कुरा नाश गर्नुहुनेछ।
परमेश्वरले येशूलाई आरमागेडोनमा यो युद्ध लड्न पठाउनुहुनेछ। यहोवाले येशूलाई आफ्नो सरकारको राजा बनाउन रोज्नुभएको छ भनेर तिमीलाई यादै होला नि। त्यसैले चित्रमा येशूले राजमुकुट लगाउनुभएको हो। उहाँले बोक्नुभएको तरवारले चाहिं उहाँले परमेश्वरका सबै शत्रुहरूलाई मार्नुहुनेछ भनेर देखाउँछ। परमेश्वरले सबै खराब मान्छेलाई नाश गर्नुहुनेछ भनेर थाह पाउँदा के तिमीलाई अचम्म लाग्यो?
दस नम्बरको कथा फेरि सम्झ त! तिमीले त्यहाँ चित्रमा के देखेका थियौ? हो, जलप्रलयले सबै खराब मान्छेलाई नाश गरेको। त्यो जलप्रलय कसले गराएको थियो? यहोवा परमेश्वरले। अब १५ नम्बरको कथा पल्टाएर हेर त। त्यहाँ चित्रमा के भएको हो? हो, यहोवाले सदोम र गमोराका मान्छेहरूलाई आकाशबाट आगो झारेर नाश गर्नुहुँदैछ।
तेत्तीस नम्बरको कथा पनि पल्टाएर हेर त। मिश्र देशका घोडा अनि रथहरूलाई के भइरहेको छ? कसले उनीहरूलाई पानीमा डुबाएर नाश गर्नुभयो? यहोवाले। तर उहाँले आफ्ना मान्छेहरूलाई बचाउन त्यसो गर्नुभएको थियो। त्यसै गरी ७६ नम्बरको कथा हेर। यहोवाको आफ्नै मान्छे, इस्राएली जातिले नराम्रो काम गर्दा उनीहरूलाई पनि नाश हुन दिनुभयो।
यसकारण पृथ्वीमा भइरहेको सबै खराब कुरा हटाउन यहोवाले स्वर्गबाट आफ्ना सिपाहीहरू पठाउनुहुनेछ भनेर अचम्म नमान। बरु, त्यसपछि के हुनेछ भनेर सोच। अब पाना पल्टाऔं र अर्को कथा पढेर हेरौं!
प्रकाश १६:१६; १९:११-१६.
बाइबलले किन स्वर्गमा घोडाहरू दौडेको कुरा गर्छ?
परमेश्वरले पृथ्वीका खराब मान्छेहरूसित गर्नुहुने लडाइँको नाउँ के हो? यो युद्ध लडेर परमेश्वरले के गर्नु हुनेछ?
परमेश्वरले कसलाई यो युद्ध लड्न पठाउनुहुनेछ, चित्र हेरेर बताऊ। उहाँले किन मुकुट लगाउनुभएको छ र उहाँको तरबारको अर्थ के हो?
कथा १०, १५ र ३३ लाई सम्झने हो भने परमेश्वरले खराब मान्छेहरूलाई नाश गर्नुहुन्छ भनेर हामी किन अचम्म मान्नु पर्दैन?
परमेश्वरकै उपासना गर्छु भनी दाबी गरे तापनि उहाँले खराब मान्छेहरूलाई नाश गर्नुहुन्छ भनेर हामीले ३६ र ७६ कथाहरूबाट कसरी थाह पाउन सक्छौं?
प्रकाश १९:११-१६ पढ्नुहोस्।
सेतो घोडमा सवार हुने येशू ख्रीष्ट नै हुनुहुन्छ भनेर बाइबलले कसरी प्रस्ट पार्छ? (प्रका. १:५; ३:१४; १९:११; यशै. ११:४)
येशूको बाहिरी लुगामा लागेका रगतका छिटाहरूले उहाँको विजय सुनिश्चित अनि निर्णायक हुनेछ भनेर कसरी पुष्टि गर्छ? (प्रका. १४:१८-२०; १९:१३; यशै. ६३:१-६)
सेतो घोडामा सवार येशूको पछि-पछि आउने सेनामा को-को पनि हुनेछन् होला? (प्रका. १२:७; १९:१४; मत्ती २५:३१, ३२)